U ciyaar dekedan Super Mario 64 ee la yaabka leh ee siman ee iOS iyo Apple TV | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/U ciyaar si la yaab leh oo siman Super Mario 64 dekedda IOS iyo Apple TV
U ciyaar si la yaab leh oo siman Super Mario 64 dekedda IOS iyo Apple TV
Nintendo classic Super Mario 64 hadda waa lagu ciyaari karaa macruufka iyo Apple TV mahad deked aan rasmi ahayn. Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa ciyaarta - oo ay ka buuxaan khiyaano badan - oo si qurux badan u socda si siman oo 60 ah ilbiriqsikiiba.
Waad soo dejisan kartaa ciyaarta oo isku day naftaada. Si kastaba ha ahaatee, kicinta iyo socodsiinta waxay u baahan tahay Xcode iyo xoogaa khiyaano ah. Haddii aad xiisaynayso, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku dul boodo ka hor intaysan Nintendo ka tirtirin meeraha.
Super Mario 64 ku soo degay IOS iyo Apple TV
Super Mario 64, kaas oo laga dooday Nintendo 64 ee 1996, ayaa soo laabasho weyn sameeyay dhawaan - markii ugu horeysay Super Mario 3D Dhamaan Xiddigaha xidhmo la sii daayay sanadkii hore on Switch, ka dibna iyada oo loo sii marayo Nintendo 64 konsole dalwaddii (sidoo kale on Switch).
Laakin, sida inta badan dhacda ciyaarta da'dan, waxaa jira siyaabo kale oo badan (aan sharci ahayn) oo lagu raaxaysan karo. Ka ugu dambeeya waa deked IOS iyo Apple TV ah oo rumeysta ama ha rumaysan, waxay u shaqaysaa si asal ah iyada oo aan la isticmaalin kombuyuutar.
Soo-saare ckosmic wuxuu qaatay deked PC ciyaarta ah wuxuuna la qabsaday inuu si cillad la'aan ah ugu shaqeeyo iOS, ka dibna tvOS. Horumariyuhu waxa uu ku wanaajiyay in uu ku shaqeeyo shaashad buuxda 60 fiim ilbiriqsikii, "mahadsanid mashruuca sm64 burburinta iyo sm64ex."
Fiidiyowga hoose wuxuu muujinayaa ciyaarta ku socota Apple TV - waxayna u egtahay mid cajiib ah darn.
Waa maxay xayiraadda?
Ckosmic wuxuu sheeganayaa in dekeddu aanay ku jirin wax budhcad-badeed ah, laakiin si aad si sharci ah ugu ciyaarto, waa inaad leedahay nuqul asalka ah Super Mario 64. Xitaa markaa, Nintendo caadiyan kama indhatiro dekedaha sidan oo kale ah. La yaabi mayno inaan aragno shirkadda Japan oo si degdeg ah u soo jiidatay.
Dhanka kale, haddii aad rabto inaad ku tijaabiso ciyaarta iPhone, iPad ama Apple TV, waxaad raaci kartaa hagaha khadka tooska ah si aad u kiciso oo u socoto. Ogsoonow inay u baahan tahay inaad geliso Apple TV-gaaga qaabka horumariyaha. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa Xcode ee Mac si aad u ururiso koodka oo aad ugu rakibto xirmada qalabkaaga.
Sida loo hagaajiyo dhibaatada "WordPress waxay sii wadaa inay ka baxdo" dhibaatada (8 hab)
Sida Loo Sameeyo Fiidiyowga TikTok: Bilowyaasha ayaa halkan ka bilaabaya